Porsche dia misafidy lalao kilalao amin'ny maodely vaovao 911 | Avy amin'ny mac aho
Porsche dia misafidy lalao kilalao amin'ny maodely 911 vaovao
Porsche dia nisafidy ny hampiasa carplay Apple amin'ny ho avy Modely 911, manilika ny drafitra handraisana tanteraka ny Android Auto. Ny orinasa Alemanina aleonao ny politika manokana Apple dia mihoatra ny an'ny Google, izay mamela ny goavambe fikarohana hanangona angona fiara.
«Ao anatin'ny fifanarahana amin'ilay mpanamboatra fiara, Google manangona angon-drakitra fiara be dia be toy ny faritra amin'ny fiara, izay naverina any Mountain View, California, ”hoy ny fanazavan'i Porsche. Ny sasany amin'ireo angona ireo dia mety ahitana zavatra toa izany hafainganam-pandehan'ny fiara, la hafanan'ny solika ary na dia ny toeran'ny throttle.
Porsche dia nanapa-kevitra ny handray ilay mpifaninana Android Auto lehibe indrindra, raha ny fantatra Apple dia tsy liana amin'ny fanangonana izany data izany, na ho an'ny statistika na tsy hifehezana ireo mpampiasa. Araka ny nolazain'i Porsche, dia satria Google dia liana amin'ny fanamboarany fiara manokana, ary ity data ity dia hanampy anao amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ity angona ity.
Ny hany fampahalalana izay carplay te hahafantatra raha ampiasaina, dia raha ny anao mandeha ny fiara. Ity dia fepetra fiarovana izay noraisin'ny mpanamboatra rafitra fialamboly anaty fiara taloha.
Saingy rehefa naniry mafy ny hamerina ny teniny i Apple Cook sy ny tale jeneraliny Tim Cook tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ny orinasa Cupertino tsy liana amin'ny fanangonana angona ianao an'ny mpampiasa ary manaja ny zony hanana fiainana manokana. Ny mombamomba anay dia tsy maintsy amidy amin'ny mpanao dokambarotra na mpivarotra. Fantatray efa ela ihany koa ny tsaho milaza fa mikasa ny hamoaka ny azy i Apple fiara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Porsche dia misafidy lalao kilalao amin'ny maodely 911 vaovao
Ny Nosy: Castaway 2 (Feno), maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
21,5 "iMac misy vahaolana 4k dia mety ho tonga amin'ny herinandro ambony